प्रकाशित मिति: Jan 23, 2021 3:06 PM | १० माघ २०७७
काठमाडौं। तनहुँका राजेन्द्र अधिकारीले कीर्तिपुरमा प्रति आना १९ लाख रुपैयाँका दरले तीन आना जग्गा किन्ने भन्दै एक लाख रुपैयाँको चेक बैना वापत जग्गाधनीलाई दिए।
जग्गा किन्न खोज्नेहरु दिनदिनै आइरहेपछि जग्गाधनीले उक्त जग्गाको मूल्य बढाएर प्रति आना २१ लाख रुपैयाँ तोके। अनि जग्गा किन्न खोज्ने नयाँ व्यक्तिले प्रति आना २० लाख रुपैयाँ किन्ने भन्दै बैना गर्न राजी भए।
हिजोको आजै तीन लाख रुपैयाँ बढी आउने भएपछि जग्गाधनीले घरमा कुरा मिलाउन नसकेको भन्दै अधिकारीलाई बैना रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरे।
धादिङका रघुपति श्रेष्ठले थानकोटमा ४ आना जग्गा प्रति आना १८ लाख रुपैयाँले किन्ने भन्दै बैना गरे। जग्गा किन्ने मान्छेको लाइन लागेरहेपछि थानकोटका जग्गाधनीले पनि जग्गाको मूल्य बढाएर २० लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्न थाले।
नयाँ आएका व्यक्तिले 'प्रति आना १९ लाखसम्म दिन्छु' भनेपछि उनले पनि छोराबुहारीले जग्गा बेच्न नमानेको भन्दै बैना रकम फिर्ता गरे।
सिन्धुपाल्चोककी जगतकुमारी खड्काले काठमाडौंको सिरान थलीको एक छेउमा प्रति आना २१ लाख रुपैयाँमा किन्ने भन्दै बैना गरिन। कोभिडअघि प्रति आना १०/१२ लाख रुपैयाँसम्म हाल्न मन नपराउने त्यो ठाउँमा जग्गाको माग बढेको बढ्यै भएर अहिले दोब्बर मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अहिले घरजग्गाको कारोबार अचाक्ली बढेपछि जग्गाको मूल्य पनि करिब दोब्बर भन्न थालेका छन्।
तीन कारण, जसले थप बढ्न सक्छ घरजग्गाको कारोबार
माग बढ्यो भने मूल्य पनि बढ्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त नै हो। कोभिडका कारण लामो समय प्रभावित भएको घरजग्गा व्यवसायले मंसिर र पुसदेखि नै ऐतिहासिक लय समातिसकेको छ। जुन लय माघ लागिसकेपछि पनि कायमै छ।
पुसमा करिब ८० हजार घरजग्गा किनेबच भएकोमा माघको पहिलो हप्तामै करिब २५ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भइसकेका छन्। जग्गाको माग बढेकैले मूल्य पनि अचाक्ली बढेको घरजग्गा व्यावसायीहरुले बताउने गरेका छन्।
कोभिडको समयमा रोजगारी गुमेर र व्यावसाय प्रभावित भएर किन्ने क्षमता गुमाएका व्यक्तिहरुले पनि पछिल्लो २/३ महिनामा राम्रै व्यवसाय गरिरहेका छन्। कोभिडको खोप बजारमा आइसकेकोले मानिसहरु आशावादी देखिन्छन्।
अहिले घरजग्गा कारोबार बढ्नुको पहिलो कारण बैंकमा पर्याप्त तरलता रहि ब्याजदर निकै तल आउनु हो। सहज र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएपछि मानिसहरुले रियल स्टेट र सेयर बजारमा लगानी बढाएको रियल स्टेट क्षेत्रका जानकार विनोद सुवेदीले बताए। 'किनबेचको अवस्था हेर्दा अब ह्वात्तै घट्छ वा मन्दी आउँछ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
घरजग्गा कारोबार बढ्ने दोस्रो आधार नेपालको सेयर बजार हो। पहिले पनि सेयर बजारले गति लिदा घरजग्गा कारोबार समेत फस्टाएको उदाहरण छन्। अहिले सेयर बजार ऐतिहासिक उचाइमा रहेकाले बजारबाट कमाएको पैसा घरजग्गामा आउने र कारोबार बढ्ने सुवेदीको विश्वास छ।
कारोबार बढ्ने तेस्रो कारण भनेको अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। विगतमा पनि राजनीति अस्थिरता हुँदा लगानको लागि नयाँ क्षेत्र रोजेर जोखिम लिनुभन्दा रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रस्तै उदाहरण छन्।
अहिले पनि राजनीति अस्थिरताले गाँजेको समय भएकोले मानिसहरु नयाँ लगानीका क्षेत्रमा हात हाल्ने मुडमा छैनन्। छोटो समयका लागि सेयर बजारमा लगानी गरे पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि उक्त पैसा घरजग्गामै आउने सुवेदीको दाबी छ। 'लगानी छिटो बढेर आएन भने पनि परेको दाममा घट्ने क्षेत्र होइन,' उनले भने।
यी र यस्तै कारणले आगामी केहि समय घरजग्गाको कारोबार बढ्ने पक्कापक्की जस्तै छ।
एक वर्षमै दोब्बर भयो मूल्य
कोभिड अघिसम्म प्रति आना १०/१२ लाख रुपैयाँमा पाइने जग्गा अहिले सिधै १५ देखि २० लाख रुपैयाँ भन्न थालेका छन्। कोभिडले प्रभावित व्यवसायीले कोभिडको बीचमा सस्तै मूल्यमा जग्गा बेचे पनि धेरै जसो जग्गाधनीले जग्गा होल्ड गरेका थिए र अहिले पनि होल्ड गर्ने मुडमै देखिन्छन्।
माग अनुसार आपूर्ति नहुने बित्तिकै घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेको व्यावसायीहरुको भनाइ छ।
दसैं अघिसम्म घरजग्गा कारोबार सुस्त भए पनि तिहारपछि भने निकै गति लिएको छ। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै करिब २ लाख घरजग्गा किनबेच भइसकेका छन्।
जति मूल्य तोक्दा पनि किन्ने मान्छे आइरहेपछि जग्गाको मूल्य दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढिरहेको छ। तीन महिना अघिको तुलनामा अहिले जग्गाको मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढिसकेको व्यवसायीको अनुभव छ।
Bijay Panta[ 2021-01-25 11:44:44 ]
के जग्गा किन्नु हो world को सबै भन्दा प्रदुसित शहर काठमाण्डू मा🤣🤣🤣🤣
Babu Raz Dhungel[ 2021-01-24 08:07:00 ]
उल्टो कुरा भयो जग्गा बिक्रिहुन छाड्यो १५ लाख आना मा किने को जग्गा १ रोपनी छ ४ बर्स आगड़ी किने को १५ मै दिनछू
Ram Bharati[ 2021-01-24 02:41:43 ]
सहर काे जस्तै गाउँ गाउँ मा पनि बिकाश र सुबिध भैदिए काे भए गाउँ का गरिब हरु ले पनि त काचुलि फेर्न सकिन्थ्यो एस, बिषय मा ध्यान कस्ले र कसरी पुर्याउने ! बिचार गाराे छ !!
Nawang Sherpa[ 2021-01-23 12:07:39 ]
Bizmandu le broker bata ramrai commision pae jasto news xa ta?
Prakash Thapa[ 2021-01-24 08:01:26 ]
Kamxaina manxelai pagal banau x ghar jagga kinbech 0% ma jharisakyo
Sagir Ahamad[ 2021-01-25 12:07:24 ]
Naya airport tayar vayepaxi thaha hunxa lutmara haru ko pata saf hunxa
Sameer Pal Rai[ 2021-01-25 04:49:00 ]
हावादारी कुरा घरजग्गाको कारोबार टाट पल्टिरहेको अबस्था कोभिड आएदेखि
Gvn Mogowl[ 2021-01-25 03:03:12 ]
News ma hola bt reality farak x sathi..
Prabin Ghising[ 2021-01-25 08:57:04 ]
काठ्माण्डौमा भुकम्प आउनु पर्छ ।
प्रबिन खरेल[ 2021-01-24 08:24:35 ]
जग्गाको मूल्य बड़ाएको राम्रो
कमसे कम जमिन देख्न त पाइनछ।
Naranath Poudel[ 2021-01-24 03:53:28 ]
Dalal ko sathi vayexa.
Jyoti Rajsharma[ 2021-01-25 06:13:09 ]
Sarkar tamasa bina x tesai le ho
Indu Paudel[ 2021-01-24 03:52:07 ]
Nachido khabar dalal harumo dong matra ho
Nabuhb Iradnahb[ 2021-01-26 07:42:40 ]
के घडेरि यस्ताे गाउतिर धान सुकाउन फिजायकाे गुन्द्रि जस्ताे यस्ताे मा पैसा हाल्न हुन्न है
Kerung Hangsem[ 2021-01-24 01:15:20 ]
मेरो पनि घर बेच्नु छ
Samyog Tamang Ghising[ 2021-01-27 03:40:05 ]
Hawa news kehi badeko xaena
Suprem Wambule Rai[ 2021-01-24 02:18:01 ]
4 aanaa 1 paisa2 dam jagga tallo alapotma26 fit ko bato bat 40 fiter m jaga 20 fitko bato ma annako jamma 16 lakha matra bijuli batiko pol sabai vayako dhal
Gopal Kadel[ 2021-01-28 02:06:35 ]
Kalpana Sarma[ 2021-01-27 09:15:16 ]
दलालि समाचार भाउ बढाउने तरिका
Lama Ranxing[ 2021-01-27 12:48:41 ]
Bakwas abo pokhara ra bharawa ma international airport start vaye paxi khatam hunxa ktm ko mahatwa
Phursang Lama[ 2021-01-26 03:49:05 ]
Jaka ko bhau xaina hawa kura nagara kancha
Dhirendra Shrestha[ 2021-01-26 02:10:32 ]
bahulaha kukur le tokeko le matra
Hari Narayan Sah[ 2021-01-25 04:33:53 ]
Shyam Baral[ 2021-01-25 02:11:10 ]
Sapana Shrestha[ 2021-01-25 02:05:30 ]
Ho sahi kura ho